Yini okufanele uyenze uma izinwele ziqala ukuphuma? Amabhunga kanye nezincomo.
Inkinga yokulahlekelwa izinwele iyaziwa ngabesifazane abaningi, phakathi kwabo ngokuvamile ngisho nomnikazi wezinwele ezinamandla. Ngempela, ngubani ongaphazamisi isimo sengqondo uma ubona izinwele eziningi zisala kulesi sinkwa? Futhi kubi nakakhulu, uma ubona ezembatho zakho ozithandayo! Futhi isimo sengqondo siba sibi nakakhulu uma ubona ukuthi ngisho namashiya kanye nama-eyelashes aphuma kakhulu. Ungamisa kanjani lobuhlungu? Iyini isizathu salenkinga yaphakade, futhi ungawuxazulula kanjani?
Ukulahlekelwa izinwele kuyinkqubo efanayo yemvelo njengokukhula kwabo, ochwepheshe bathi. Kodwa akekho othanda ukuhlukana nezinwele zabo ezinzima kanye! Kungenzeka yini ukuphatha lesi simo ngokuthula njengenqubo yemvelo?
Ukucindezeleka nezinwele zakho
Phakathi kwemizwa eqinile nokushaywa izinwele kuncike ngokuqondile, okuvezwe ososayensi ababandakanyeka kakhulu ocwaningweni kule nkambu. Uma uvame ukwethuka noma ungakwazi ukuphumula ngokweqile isimo esicindezelayo, khona-ke uzohlinzekwa ukulahlekelwa izinwele okungapheli!
Okuhlangenwe nakho okunamandla nakho kungaholela ekutholeni, izinkinga zezinwele, impilo embi kanye nemibimbi. Kulesi simo, udinga ekugcineni unqume ukuzinakekela futhi ube nokuphumula okuhle.
I-Dandruff nezinwele zakho
I-Dandruff iyimbangela enkulu yokushaya izinwele. Kulimaza isiqhwaga, sinciphisa izimpande zezinwele futhi, ukuvala ama-pores, kuvimbela isikhumba ukuphefumula.
Izimbangela zezinhlanzi zingaba ziningi, futhi okuyinhloko kungenziwa kuphela ochwepheshe. Kwezinye izimo, ama-anti-dandruff agents angakwazi ukuxazulula le nkinga, kodwa kubaluleke kakhulu ukuthola imbangela yangempela yokubonakala kwayo.
Imithi nezinwele zakho, amashiya kanye ne-eyelashes
Ngezinye izikhathi izinwele ziphuma ngaphandle, ziphikisana nokusetshenziswa kwanoma yimiphi imithi. Lezi zingaba yizinzalo zokubeletha, izithintela zokuvimbela imithi, izidakamizwa zokucindezeleka, imishanguzo yegazi, i-steroids, i-diuretics. Ngaphambi kokuthatha imithi, kufanele uxhumane nomchwepheshe noma okungenani ufunde imiyalelo yokusetshenziswa.
Abesifazane abaningi emva kokukhulelwa noma emva kokuyeka ukuthatha izidakamizwa ze-hormonal baqala ukulahlekelwa izinwele ngokushesha. Into ewukuthi ekuqaleni lezi zindlela zenza izinwele zibe zikhulu, futhi uma beyeka ukungena emzimbeni, umzimba awukwazi "ukuzondla" uqobo, ngoba kakade inani le-koqweqwe lwawo lwenyanga liye ladluliselwa kudokodo.
Ngokuvame ukulahlekelwa izinwele, ukubulawa kwesithunzi kungukusola. Ukubhekana nakho noma ukuxazulula ingxenye encane kungenza udokotela omuhle kuphela. Khumbula ukuthi akufanele ugcine imali bese uya emtholampilo wokuqala.
I-Chemistry nezinwele zakho
Inqubo yokugqoka izinwele, kanye nokukhwabanisa, nokuvama, ngokuvamile kuholela ekulahlekeni kwezinwele. Uma unama-braid braid, udonsa izinwele emsila noma ugqoke i-wig, kuyingozi futhi izinwele, ngoba noma yikuphi "ubudlova" phezu kwabo kuyonakalisa isakhiwo sabo.
Kodwa, uma usetshenziselwa ukudaya izinwele zakho futhi ungeke ukwenze ngaphandle kwalo, khona-ke uthenge udayisi obuningi obubi, obuningi bezobuchwepheshe futhi usebenzise kuphela ochwepheshe ongenza ngempela "ukuphawula".
Lokhu kusebenza futhi ekulahlekelweni kwe-eyelashes. Ungaboni ubuso bakho, futhi uthenge kuphela i-mascara yekhwalithi esitolo ngegama elihle, hhayi ekushintsheni, ukusheshisa ukusebenza.
Ngeshwa, ukulahlekelwa izinwele kuhlobene nokuntuleka kwe-calcium emzimbeni. Ungakhohlwa ngemikhiqizo yobisi, ikakhulukazi i-cottage shizi, ecebile kakhulu ezintweni ozidingayo.
Kuphela ukubhekana nenkinga yokulahlekelwa izinwele akunakwenzeka. I-Gel, i-shampoo, i-foam, i-mascara, i-eyeliner, amapenseli e-eye kanye nakho konke okubonayo nsuku zonke ekukhangiseni okucasulayo ku-TV, akuyona i-panacea yengozi yakho. I-trichologist kuphela engasiza lapha. Nguye kuphela ongakwazi ukuqonda izimbangela zangempela zokulahlekelwa izinwele, ngoba kuphela umphumela wezinqubo ezijulile ezenzeka emzimbeni futhi kaningi - ukuthuthukiswa kwesifo sangaphakathi. Uchwepheshe uzoqhuba ukuhlolwa futhi anikeze indlela efanele yokwelapha.
Londoloza izinwele zakho ezinhle, izinwele ezinde nezinamandla nempilo yakho!
Amathiphu Omlingo Wezinwele Ezinhle
Ikhanda lezinwele ezisezintweni ezinwele ezinde
Ukugoqa okushisayo ngezinwele
I-Technique yomsila wamahhashi oboya izinwele
Kusho ukukhula kwezinwele ezijulile
Senza ibhola lonyaka omusha enkambisweni yeDoupage - master class with izithombe ezinyathelo ngezinyathelo
I-Sacrament Magic yeMshado
Impahla kaJeanne Friske ingaboshwa
Ukunakekelwa kwezinwele okuphumelelayo ngesikhathi sokukhulelwa
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngamafutha we-castor?
I-Canapes yenyama nemifino
Ukunakekelwa kwe-Face and neck
Lapho izimpawu zokuqala zokubeletha ziqala
Sea kale ngokulahlekelwa isisindo
Lo fan wanika uJeanne Friske indlu yokuhlala eMiami nge $ 1 million
UPaul Wesley, indima emafilimu